February 11, 2021 – Healthy Life Journal
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဆယ်ကျော်သက်အများစုဟာ လူလုပ်ဟော်မုန်းလို့ တင်စားကြတဲ့ စတီးရွိုက်တွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ စတီးရွိုက်ဆေးတွေဟာ ကြွက်သားဖြစ်စဉ်ယိုယွင်းမှုကို ဟန့်တားပေးတာကြောင့် လူငယ်တွေ၊ အထူးသဖြင့် အားကစားသမားတွေ သုံးချင်ကြပါတယ်။ စတီးရွိုက်ဆေးရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးကို မသိလို့ သုံးလေ့ရှိကြတာပါ။...
မြန်မာလူမျိုးများ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစိမ်းစားသည့် အကျင့်ပြင်ရန်လိုပြီ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများစုအား ပိုးသတ်ဆေးအများကြီး အသုံးပြုထားလေ့ရှိသည့်အတွက် မြန်မာလူမျိုးတို့ နေ့စဉ်စားလေ့ရှိသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့အား အစိမ်းစားသည့်အကျင့်ကို ပြင်ရန်လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးကိုကိုက ပြောကြားသည်။ “ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ဓာတုဗေဒပါတဲ့ ဆေးတွေဖျန်းတာရှိတယ်။ ဘယ်လောက်ကပ်ငြိနေလဲဆိုတာ စားသုံးသူတွေအနေနဲ့...
ဆီးချိုသမား ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ မတည့်စာစားကြမယ် . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုသမားတွေက မတည့်တဲ့အစာတွေကို စားချင်ကြတယ်။ ဥပမာ-အသီးတွေမှာ ချိုတဲ့အသီးတွေကို စားချင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး စားလို့ရပါသလဲ ဆရာ။ A. အသီးတွေကို နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်။ ချဉ်တဲ့အသီးရှိတယ်၊ ချိုတဲ့အသီးရှိတယ်၊...
ငယ်သွားလဲချိန်မှာ သွားတွေပြွတ်ပြီး ပေါက်လာတယ် . . .
—–၊ (သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး) ၊—– Q. ကျွန်မကလေးငယ် သွားလဲချိန်မှာ သွားတွေပြွတ်ပြီး ပေါက်လာပါတယ်။ စိုးရိမ်သင့်ပါသလား ဆရာ။ A. သွားတွေပြွတ်ပြီး ပေါက်တာက အကြောင်းရှိပါတယ်။ မေးရိုးက သေးငယ်ပြီး ကြီးထွားမှုက နှေးတာကြောင့် ကလေးသွားတွေက နေရာမဖယ်ပေးသေးချိန်မှာ...